चिली - ALinks
कसरी काम पाउने र चिलीमा काम गर्ने।
18 सक्छ, 2021 करुणा चन्दना चिली, जब
चिलीमा विदेशी लगानीकर्ता र भूतपूर्व प्याट्सहरूका लागि प्रशस्त संसाधनहरू छन्। चिलीमा काम गर्ने बारेमा बढि जान्नको लागि हाम्रो गाईड पढ्नुहोस्। यो कसरी कम्पनी शिष्टाचार र कराधान मा रोजगार खोज को बारे मा जाने बाट छ। तपाईं बाहिर हुनु पर्छ
चिलीमा शरणका लागि कसरी आवेदन दिने? यहाँ जान्नुहोस्!
सेप्टेम्बर 15, 2020 करुणा चन्दना चिली, शरणार्थीहरू
परराष्ट्र र आन्तरिक मन्त्रालयले चिलीमा शरणार्थीहरूको निर्वासनको निर्णय गरे शरणार्थीका लागि संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्तको साथ समन्वयमा (UNHCR)। उनीहरूले पुनर्वासका लागि वार्षिक लक्ष्य पनि राखे। केसहरू कागज अनुप्रयोगमा छन्। जब त्यहाँ छन्
कसरी चिली भिसा आवेदन को लागी आवेदन गर्ने?
23 सक्छ, 2020 एन्टिका कुमारी चिली, भिसा
चिलीमा भिसाका लागि आवेदन दिनुहोस्- तपाईंले चिली भिसा आवेदनको लागि कुन उद्देश्यका लागि आवेदन दिन आवश्यक छ भनेर जान्नु आवश्यक छ। तपाईले कल गर्न सक्नुहुन्छ ०044716270१5० (#)) वा ईमेल-consulate@embchile.co.nz मा। यदि हो भने, तलका निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्। लागू गर्नका लागि चरणहरू